Wasaaradda Beeraha, Hay’adaha Caalamiga Ah Iyo Kuwa Maxaliga Ah Oo Hargeysa Ku Yeeshay Shir Lagaga Wada-hadlay Kobcinta Wax-soo-saarka | Himilo Media Group
Wasaaradda Beeraha, Hay’adaha Caalamiga Ah Iyo Kuwa Maxaliga Ah Oo Hargeysa Ku Yeeshay Shir Lagaga Wada-hadlay Kobcinta Wax-soo-saarka
Hargeysa, 13 Feebarweri, 2018 (Himilo) – Wasiirka Wasaaradda horumarinta Beeraha Somaliland Mudane Axmed Muumin Seed ayaa furay shir ay Wasaaradda iyo hay’addaha beeraha ka shaqeeyaa kaga arinsanayeen sidii loo dardar galin lahaa kor u qaadka hawlaha Cunto soo saarka dalka.
Shirkan oo ka dhacay xarunta wasaaradda horumarinta beeraha ayaa waxa ka soo qayb galay hay’adaha maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha beeraha.
Wasiirka Wasaaradda Horumarinta beeraha Mudane Axmed Muumin Seed oo khudbad halkaasi ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay hawlaha beeraha marka ay hay’adduhu ka shaqaynayaan in guud ahaan laga wada socdo si loo doorto sida ay ugu kala muhiimsan yihiin.
Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi “Wasaaradda horumarinta beeruhu waxa ay dhiirigalinaysaa in dhammaan dhinacyada ka shaqeeya arrimaha beeruhu ay wasaaradda kala socodsiiyaan hawlaha ay qabanayaan si loo kala horumariyo siyaabaha ay muhiimadda u kala leeyihiin, isla-markaana ay hawlaha la qabtaan joogto u noqdaan”.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi “Shirkan aynu isugu nimid waxa uu daaran yahay sidii aynu uga wada socon lahayn hawlaha beeraha ee la qabanayo ee aanay cid walba meel gaar ah hawsha ka waddeen si ay kor ugu kacdo heerka cunto soo saar ee dalku”.
Wasiirka Beeraha Jamhuuriyadda Somaliland waxa kale oo uu sheegay in aanay Wasaarad ahaan Raali ka ahayn in Masuuliyiinta Hay’adaha Caalamiga ah ama kuwa Maxaliga ah ee Soomaalida ahi ay Hay’adaha geeyaan Beero gaar ah, halkii ay ka ahayd inay Beeralayda u sinnaadaan “Innamada Soomaalida ah ee la shaqeeya Hay’adaha Caalamiga ah markay Gobollada u baxayaan haddii aanay Isku-duwihii Wasaaradda ee Gobolka la xidhiidhin (waa khalad), Waayo? Cabashooyinka Xafiiska noogu yimaadda waxa ka mid ah Hay’adda Caalamiga ah marka la yidhaahdo Sool ama Awdal tag Qofka Soomaaliga ah ee la socdaa Beerta adeerkii buu geynayaa, Arrintaasina waxay ceeb ku tahay Qaranka, Wasaarad ahaan iyo Hay’ad ahaanba.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Waxaanu doonaynaa inaanu meesha ka saarno Nin Jeclaysi, Reernimo iyo Qabiil, markaa intaasi nagu soo noqnoqoto ka Wasaarad ahaan Raali ka noqon mayno. Inanta la socda Hay’adda Caalamiga ahi marka la yidhaahdo Gobol hebel tag uma baahnin inuu tago Beerta Adeerkii ama Abtigii, laakiin waxaanu doonaynaa inuu arko dhibka haysta deegaanka Dadka ku nool (Beeralayda), aniguna intaan Wasaaradda joogo Raali ka noqon maayo arrintaas, Hay’adda aanu taa ku aragno waxaanu awood u leenahay inaanu shaqada ka joojino oo aanaan wada-shaqayn la yeelanayn, Waayo? Taasi waa Cabashada ugu weyn ee Xafiiska taalla.”
Wasiirka Beeraha Somaliland Md. Axmed Muumin Seed waxa uu sheegay inay Xukuumad ahaan la dagalaamayaan Musuqmaasuq “Haddii hore mad-madow u jiray Xukuumadda uu Madaxweynuhu hoggaaminayo waxaanu la dagaalamaynaa Musuqmaasuqa, Qabyaaladda ayaanu la dagaalamaynaa, Cidda aan labadaa Raali ku ahayn Wasaaradda wax wada shaqayn ah ma yeelanayaan, taanna ballan ILLAAHAY baan ku qaadayaa, Waayo? Wasiir baan ahay, waalla I dhaariyey, waxa la igu dhaariyey inaan Dadkayga Caddaalad u sameeyo, la iguma dhaarin in halka aan ka soo jeedo Hay’adda ku hago, markaa tii aanu ku dhaaranay ayaanu doonaynaa inaanu fulino, oo Inanka Saylac jooga iyo ka Badhan joogaa ay si Caddaalad ah wax u wada helaan, Cidda sidaa nagula shaqaynaysa Shaqada waanu la wadaynaa, Cidda ay ku adkaataana raali bay ahaan doonaan.”ayuu yidhi.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta Beeraha Mudane Maxamed Cilmi Aadan (Ilkacase) ayaa isaguna khudbaddiisa ku tilmaamay inay muhiimadeeda leedahay in dhammaan hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha iyo wasaaradda beeruhu ka wada tashadaan nidaamka wax soo saar ee dalka, waxaanu yidhi isaga oo arrimahaasi ka hadlaya “Sharaf weyn ayey dhamaanteen inoo tahay in Wasaaradda horumarinta beeraha iyo hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeruhu shir ay kaga tashanayaan arrimaha wax soo saarka iskugu yimaaddaan.”
Maareeyaha Hay’adda La tacaalida Aafooyinka & Kaydka Raashinka Faysal Cali Sheekh oo ka mid ahaa masuuliyiintii shirka ka soo qayb gashay ayaa waxa uu sheegay in Wasaaradda horumarinta beeraha iyo hay’addooda waxa shaqayn balaadhan ka dhaxayso, waxaanu yidhi isaga oo arrimahaasi ka hadlaya “Dhibaatooyinka qaranka waxa ka mid ah meelihii kaydka cuntada oo aanu dalku lahayn taasi ayaanu wasaaradda horumarinta beeraha ka wada shaqaynaynaa oo wada shaqayn balaadhan ayaa naga dhaxaysa”.
Shirkan oo socday hal Maalin, ayaa Gebogabadiisii waxa lagu ballamay in Shirarka noocan ah la joogteeyo.